(Nature) ဂျပိုးကို ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရမလဲပြောကြပါဦး 20Jul2011 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
How To.. » (Nature) ဂျပိုးကို ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရမလဲပြောကြပါဦး 20Jul2011	27
Posted by nature on Jul 20, 2011 in How To.. | 27 comments
Nature နဲ့ Howtodo
ဂျပိုးကို ဘယ်လို နှိမ်နှင်းရမလဲ။ ဂျပိုးတွေဟာ ရှိလာပြီဆိုရင် အင်မတန် ရှင်းရခက်ပါတယ်။ အစာမစာရပေမဲ့လည်း တော်တော် ကြာကြာအသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။ ညသန်းကောင်ဆိုရင် အစာရှာထွက်တတ်ပါတယ်(၂နာရီခန့်)။
စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်တော့ ကြောင်ပန်းရွက် ၊ ဒူးရင်းသီးအခွံ ၊ ပရုပ်လုံးတွေက ဂျပိုး ပြေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Hair Dryer တွေနဲ့လည်းမှုတ်ကြည့်ဖူးပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဂျပိုးရှိရင် နေပူလှမ်း ဖျာကိုတုတ်နဲ့ ရိုက်တတ်ကြပါတယ်။
ဂျပိုးနှိမ်နှင်းရေး အတွေ့အကြုံ လေးများရှိရင်တင်ပေးကြပါဦး။
ဒီလိုအကူအညီတောင်းပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးခဲ့တဲ့ ဂျပိုးသေဆေး ဟာသလေးတခုပြန်သတိရတယ်။
တခါတုန်းက ရွာတရွာမှာ လူတယောက်ဟာ သူ့အိမ်မှာ ဂျပိုးသောင်းကျန်းလို့ မြို့တက်ပြီး ဂျပိုးသတ်ဆေး ၀ယ်သတဲ့။ ဂျပိုးသတ်ဆေး ရောင်းတဲ့သူက သူ့ဆေးကို ရဲရဲကြီးအာမခံပြီး ရောင်းသတဲ့။ သူ့ဆေးနဲ့ သတ်လို့ မသေတဲ့ ဂျပိုးတကောင်ကို ပြနိုင်ရင် ငွေ ၁၀၀၀၀ကျပ် ပြန်လျှော်မယ်တဲ့။ အထုတ်ကလေးက နဲနဲ တော့ ကြီးတယ်။
ဒါနဲ့သူလဲ ၀ယ်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ဂျပိုးသတ်ဖို့ ဆေးထုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ သစ်သားတုံးလေး ၂တုံးကိုပဲတွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့သူလည်း ဘယ်လိုသတ်ရမလဲမသိလို့ ဆေးညွှန်းကိုဖတ်ကြည့်သောအခါ-
…ဂျပိုးကို ဖမ်း၍ သစ်သားတုံး တတုံးပေါ်တင်ပြီး နောက်သစ်သားတုံး တတုံးနှင့် ထုပါတဲ့။…မသေလျှင် ဆုငွေ ၁၀၀၀၀ကျပ် လာထုတ်ပါတဲ့…။
View all posts by nature →	Blog
kai says: ယူအက်စ်မှာ.. ဂျပိုးနှိမ်နင်းဖို့.. ပရိုကို အခကြေးငွေပေးခေါ်လို့ရတယ်..။
ခွေးနဲ့ ဂျပိုးရှိတဲ့နေရာ အနံ့ ခံခိုင်းပြီး.. အဲဒီနေရာတွေကို… အနှုတ်ဒီဂရီ တော်တော်များတဲ့.. ပိုးသတ်ဆေးပါတဲ့… အအေးငွေ့နဲ့မှုတ်လိုက်တယ်..။
အောက်ကတော့.. အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ သတ်နည်းကာကွယ်နည်းတွေ.. ဂိုဂယ်ကရတာ…။ Home remedies can safely kill bed bugs
Use of canola oil or rapeseed oil and pyrethrins. These herbs get attached to the bug’s nervous system. They are also effective in killing the bug’s eggs.
Black walnuts are also very effective in eroding bed bugs from your house.
Spread some mint leaves at those places which are more prone to bed bugs. The pleasant smell of mint is unpleasant for bed bugs thus it repels bed bugs.
Spreading Lavender is also one of the home remedies to get rid of Bed Bugs. The smell of Lavender oil isabig turn off to bed bugs. You can also use lavender sachets to place in your closets and wardrobes. Its pleasant smell is very effective in preventing bed bugs. To make Lavender sachet is no rocket science. First of all dry the Lavender flowers. After that put the dried flowers between two pieces of fabric. Then sew these pieces around the corner.
For best results rub lavender oil on your bed frame and you can also add some drops in water to mop the floor of your house.
Some special covers are available in the market which is made up of special fabric. These covers can easily trap bed bugs which are present inside your mattress.
One of the best known herbs to drive away bed bugs is Cayenne pepper.
Treat your mattresses with steam as high temperature is very harmful for Bed bugs.
Always wash the bed sheet and clothing in hot water. This not only prevents bed bugs but also kills the invaded one.
Frequently move out your mattresses and keep them under the sun since temperature over 113 degrees Celsius are said to kill bed bugs. This is alsoahome remedy to destroy lingering bed bugs.
Dust around some “diatomaceous earth”, especially in your bedroom. Diatomaceous earth is composed of algae fossils which causes jagged edges in diatomaceous earth. Jagged edges cut the surface of bed bugs causing them to bleed to death when they crawl across it.
Always remember that the cover or sheet of the bed should never touch the ground otherwise bugs can easily crawl up to you and suck your blood while you sleep.
Placing toys, footwear, clothing, rugs, stuffed animals, bags and other non-launderable things in the drier for some period of time prevents not only bed bugs but also many other home pests. This removes bed bugs but after that do not forget to clean the laundry room as bed bugs can make their unwelcome comeback to other parts of the house from laundry room.
Spraying alcohol is notadefinite fix but can kill some bed bugs on contact.
You can also make your own herbal spray. Whisk 10 drops each of lavender, eucalyptus and rosemary essential oil in one cup of water. Fillaclean spray bottle with this mixture. Spray the infested area of your place. Do not forget to wear gloves as contact with essentials can cause health problems.
Spread some boric acid powder to the infested area. Never apply boric acid directly to mattresses.
Keep the spray out of the reach of children.
Never spray on mattresses, sofas or other sensitive areas of human contact. Though organic, these sprays can be harmful.
It is far better to take care of few dos and don’ts. Try to prevent yourself falling into the prey to the extreme condition where you tend to use toxic chemical pesticides which are harmful not only to bed bugs but human being too get adversely affected by it. These home remedies are safer and cheaper. Stop reeling from bed bug agony, make use of home remedies to get rid of Bed Bugs.
ogre says: လွယ်ပါတယ်ဗျာ
insectkiller တွေမှာ ဂျပိုးသေတဲ့ ဟာဝယ်ပီး
etone says: ကြမ်းပိုးဆိုတဲ့ အကောင်က လူအိပ်မှ တိတ်တဆိတ် အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်လာပြီး တွယ်ကြတာ …စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် … ။ ကြမ်းပိုးသေတဲ့ စပရေးဘူးတွေရှိတယ်လေ … နေ့တိုင်း ဖြန်းထားလျှင် တဖြည်းဖြည်းတော့ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်… ။ ကြမ်းပိုးတွေက ကိုယ့်အိမ်မှာ မရှိလည်း သူများ အိမ်က လာလည်တတ်လို့ နေ့တိုင်း စပရေးဖြန်းကြည့် … နှစ်ပတ်လောက်ဆို အိုကေသွားပြီ ။
pan pan says: ကြမ်းပိုးတွေ အစာမစားပဲ ၆လလောက်အသက်ရှင်နိုင်သတဲ့
တလောက ခရီးဆောင်အိတ်ကို အသုံးလိုလို့ ထုတ်လိုက်တာ အိတ်ထောင့်မှာ ကြမ်းပိုးတစ်ကောင်တွေ့တယ်
သွေးမစုတ်ရလို့ ပိန်နေပေမယ့် အသက်ရှိသေးတယ်
ကြမ်းပိုးကပ်ရင် ကြမ်းပိုးသတ်တဲ့ စပရေးဖြန်း၊ ပြီးရင် ဆေးဖြန်းထားတဲ့ ဖျာတို့ မွေ့ယာတို့ကို နာရီနည်းနည်းကြာ လိပ်ထားပေတော့
ကြောင်ကြီး says: မရက်စက်ကြပါနဲ့ကွယ်တို့။ သူ့အသက်လည်း မသတ်ရ၊ မိမိလည်းချမ်းသာစေတဲ့နည်းကတော့…….
ကြမ်းပိုးရောင်းရန်ရှိသည်။ တကောင် ၁၀၀လို့ရေးပြီး အိမ်တွင်းနေရာအနှံ့ ကပ်ထားလိုက်….
pan pan says: ဟုတ်ကဲ့
အိမ်ကဂျပိုးတွေ ဦးကြောင်ကြီးကို ရောင်းမယ်လေ
ဦးကြောင်ကြီးအကြံပေးတာ သဘောကျလို့ ဂျပိုး export လုပ်မလားလို့
nature says: ကိုကြောင်ကြီးရေ တကောင် ၁၀၀ နဲ့ မရောင်းပါဘူး။ အလကားပေးပါမယ်။ လာယူတဲ့သူတွေကို ထမင်းကြွေးပါမယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 22
swam says: လွယ်လွယ်လေးပါ လောင်ချာ နှစ်လက် ။ Ak-47 ,Magnum,Kodachi,နှင့် လောက်လေးဂွ
နှစ်လက်လောက်ဆောင်ထားပါက ဂျပိုးများ မိသားစုအလိုက်ထွက်ပြေးကြကုန်မှာအမှန်ပါ ။
swam says: Jumbo
naywoonni says: ပင်စိမ်းပင်ရဲ့ အနံ့ ကိုရရင် ကြမ်းပိုး မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့ ….။ အဲဒိတော့ အိပ်ယာအောက်မှာ ပင်းစိမ်းရိုးတွေ ထားမယ်ဆိုရင် ကြမ်းပိုးပြေး ပါသတဲ့ …။ သေအောင် သတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်…။ ကိုကိုကြောင်…….
nature says: အားလုံး အကြံပေးကြတာ ကျေဇူးတင်ပါတယ်။
Insect killer တွေလဲ ည ၂နာရီလောက် ဂျပိုးထွက်ချိန်စောင့်ဖြန်းဘူးတယ်။ အကုန်မသေဘူး ကျန်သေးတယ်။ အ၀တ်ဘီဒိုတွေထဲမှာလည်း ရှိတယ်။
သူကြီးရေ ဂျပိုးနှိမ်နှင်းရေး အဖွဲ့တွေက ဈေးတော်တော်ကြီးလား။ မျိုးပြုတ်ရမယ် အာမခံလား။ အကုန်မသေလို့ နောက်တကြိမ်ပြန်ခေါ် ရရင်ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
kai says: အခန်းအကျယ်.. အကောင်ပြန့်ပွားနေမှုအပေါ်မူတည်ပြီးပေးရမှာပေါ့..။
အရမ်းမများလောက်ပါဘူး..။ ပရိုတွေပဲလေ..။ နာမယ်ဘယ်အပျက်ခံပါ့မလည်း..။ မျိုးပြုတ်အောင်ချမှာပါ..။
မြန်မာပြည်မှာ.. အဲဒါမျိုး ဆားဗစ်အလုပ်… လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်..။
မောင်ဘလိူင် says: ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံကတော့ ခြင်ထောင်စိမ်ဆေးပြား Supa tab ကို သုံးတာပဲ။
ဂျပိုး သတ်ဆေးမျိုးစုံသုံးတာ အဆင်မပြေလို့ အဲဒီနည်းကိုသုံးကြည့်တာ ကနေ့ အထိ
တစ်ကောင်မှ မတွေ့ တော့ဘူး။အဲဒီဆေးပြားလေး ကို ဇလုံထဲထည့်။ ခြင်ထောင်ကို
စိမ်။(ခြင်ထောင်မှာလည်း ငတိတွေ ရှိသဗျ) ပြီးတော့ နောက်တစ်လုံးကို ရေသန့်
ဘူးတစ်ဘူးစာနဲ့ဖျော်။စပရေးဘူးထဲ ထည့်ပြီး ကုတင် ကြမ်းကြား ဖျာ အကုန်လိုက်
ဖျန်းပေးထားလိုက်။ခြင်ထောင်ကိုလည်း အရိပ်ထဲမှာ ပဲ လှမ်းထားပေါ့။ မနက်လောက်
က လုပ်ထားလိုက်ရင် ညအိပ်တဲ့အခါ အကုန်ပြန်ခင်းလို့ရပြီပေါ့။ တခြားကနေ လာ
လည်တဲ့ ငတိတွေလည်း ဆေးဖျန်းဧရိယာထဲရောက်တာနဲ့ ဂိ ကုန်တာပဲဗျို့။
ဘလှိုင် တို့က အပိုမကြွားဘူး လက်တွေ့ လက်တွေ့Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1819
နွယ်ပင် says: ဂျပိုးကို Happy ကထုတ်တဲ့ ဂျပိုးဆေးနဲ့ ရှင်းရင် တကယ် ပျောက်တယ် ဆေးဘူးက တစ်ဘူး (1500) တည်းဆိုတော့ ဈေးလဲ မကြီးဘူး နောက်ဆေးနံ့လည်းမနံ့ဘူး စမ်းကြည့်ပါလား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို အဲ့သည့် Happyဂျပိုးသတ်ဆေးဘူးကို စကာင်္ပူကတောင် လှမ်းမှာရတဲ့ အထိကောင်းပါတယ်တဲ့
ကြော်ငြာမဟုတ်ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1163
hmee says: တခါက ရန်ကုန်အိမ်မှာ ဂျပိုးစွဲရော။ အစက မသိဘူး အတော်ကြာမှသိတာ။ ဘယ်လို သတ်သတ် မကုန်နိုင်ဘူး။ ချထိုးအခင်းကြားထဲ ၀င်ပြေးတာလေ။ နောက်ဆုံး အင်းဆက်ကေလာနဲ့ ဆော်မှ မျိုးပြုတ်သွားတယ်။ ရှိတဲ့နေရာပဲ ကွက်ဖြန်းလို့ မရဘူး။ တခါတည်း ၄ဗူးလောက် ၀ယ်ပြီး ကြမ်းတချောင်းတောင် မချန်ပဲ တအိမ်လုံး နေရာအနှံ ပေါပေါလောလောကို ဖြန်းပြစ်တာ တခါတည်း ဥတောင်မကျန်ဘူး အပြုတ်ပဲ။ nature ရေ ဗီဒိုထဲက အ၀တ်တွေ အကုန်လုံးထုတ် ရေနွေးဖျောပြစ်ပြီးလျှော် ပြီးတာနဲ့ (တရက်တည်း အပြီးလုပ်ရမှာနော်) တအိမ်လုံး ချောင်လျှို ချောင်ကြားမကျန်အောင် နေရာလွတ်မကျန်အောင်ဖြန်းပြစ် အဲဒါဆို မျိုးပြုတ်ရော။ လူကတော့ တနေရာသွားနေပေါ့ အနံပျောက်မှ ပြန်ဝင်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အနံမပါတာ ၀ယ်ဖြန်းပေါ့။ အဲလိုသာလုပ် နောက်ဆို ဂျပိုး မြင်ချင်ရင် ပြတိုက်တောင် သွားကြည့်ရမှာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1432
cobra says: ဂျပိုးရှိရင်အိပ်ကိုမအိပ်တက်တာပါ
windtalker says: ဒူးရင်းသီး အခွံ ကို ဂျပိုး ရှိတဲ့ နေရာတွေ မှာ ထားထားကြည့်ပါ ခင်ဗျာ
တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်း သူ့ အလိုလို ပျောက်သွားတာ ကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 150
Yan Shin says: မရက်စက်ကြပါနဲ့ကွယ်တို့။ သူ့အသက်လည်း မသတ်ရ၊ မိမိလည်းချမ်းသာစေတဲ့နည်းကတော့…….
ကြောင်ကြီးတစ်ကောင် ရောင်းရန်ရှိသည်။ တကောင် ၁၀၀လို့ရေးပြီး ရွာအတွင်းနေရာအနှံ့ ကပ်ထားလိုက်….
(ကိုကြောင်ကြီး စတာနှော်…… ကိုကြောင်ကြီးရှိနေမှ အီတုန်းတို့လို ကြွက်ကလေးတွေ ခေါင်းမထောင်ရဲမှာ…ဟီဟိ)
myatminaung says: myanmar နည်းကတော့ polo ဂျပိုးဆေးနဲ့ ရှင်းရင် ပျောက်တယ်
1 ဘူးကို 100 kyats
myatminaung says: it is not advertising
ဆူး says: ဂျပိုး ပြသနာတော့ တခါမှ မကြုံဘူးဘူး..
ဂျပိုးကို ၇ပွိုင့်နဲ့ လာရောင်းသွားတယ်။
nigimi77 says: အကောင်သေးလေးတွေဟာ ၅ ကြိမ် အခွံလဲပြီးရင် အရွယ်ရောက်သွားတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား အကောင်ဟာ
တခါ ဥ ရင် ဥ အရေအတွက် 100~250 လောက် ဥ တယ်။ ဥ တွေဟာ တစ်ပါတ် ကနေ နှစ်ပါတ် အတွင်းမှာ အကောင်ပေါက်
လာပြီး တစ်ပါတ် လောက်ကနေ စပြီး သွေးစုပ်လာနိုင်တယ်။ ၄ ပါတ် ဆိုရင်တော့ အရွယ်ရောက်တဲ့ အကောင်ကြီး ဖြစ်လာတယ်။
ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ့ကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး ညဖက်မှာ လှုပ်ရှားသွားလာပြီး လူတွေရဲ့ သွေးကို စုပ်ယူကြတယ်။ ဂျပိုးကိုက်ရင် ယားယံတဲ့အတွက် လူ နဲ့သေးငယ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန် တွေ အတွက် အလွန် စက်ဆုပ်ဖွယ် အင်းဆက်တွေ ဖြစ်တယ်။
သို့ သော်လည်း ရောဂါပိုး ဖြန့် ဝေ ကူးစက်ခြင်းတော့ မရှိဘူး။
nigimi77 says: ကို Nature ရေ ။ ခင်ဗျားက ဂျပိုး အကြောင်းကို စလိုက်တော့ ကျုပ် စာရေးချင်လာတယ်။
အဲဒီ အကောင်တွေဟာ ခြင်လောက် အန္တရာယ် မကြီးပေမဲ့ သိပ် အမြင်ကပ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အင်းဆက် မျိုးနွယ်ပဲဗျ။
ဂျပိုး အကြောင်းကို ဒီထက်ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ရေးချင်တယ်။ ကျုပ်တို့ နဲ့အမြဲအတူရှိနေတဲ့ အကောင်ရဲ့ 
အကြောင်းကို သေချာသိထားမှ ဖြစ်မယ်။ အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုတော့ ၀ီကီကနေ ရှာရမှာပေါ့။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဂျဘိုးတွေမှာက နာရီးမရှိဘူး
သေခြာတာကတော့ ဆာနေတဲ့အကောင်ကတော့ အခွင့်ရေးရရင်
ငြိမ်နေတဲ့လူရဲ့ မိရာကို သွေးစုပ်မှာဘဲ
( ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ နေ့ပွဲပြလည်း နေ့ဘက်မှာကိုက်တာဘဲ ညဘက်ဆိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း )
ဒါပေမယ့် အလင်းရောင်ကိုတော့ေ၇ှာင်တဲ့သဘောရှိမယ်ထင်တယ် ( အထင် )
လူဆိုတာက အိပ်နေပြီဆိုရင် သေတာနဲ့သိပ်မကွာဘူးလေ
အထူးသဖြင့် အိပ်နေတော့ ငြိမ်နေမယ်
ငြိမ်နေတော့ တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ သူတို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာကိုဆော်မယ်
သူ့အသက်သတ်ခြင်းကို ကျုပ်က သိပ်အလိုမရှိဘူး
ကျုပ်ငယ်ငယ်တုန်းက လယ်တောမှာ ကြက်မတစ်ကောင် အုဝပ်နေတယ်
သေးသေးလေးတွေ အကောင်ရေ သိန်းနဲ့ချီရှိမလားဘဲ
ကြက်တင်းကို မီးရှို့လိုက်တယ် ကံမကောင်းတဲ့ကောင်တော့ မီးလောင်ပြီး သေမှာပေါ့
ဟိုဘဝက သူများကို ဘယ်လိုနှိပ်စက်ထားသလဲမှ မသိတာ
ကျုပ်ကတော့ တစ်ခါမှာ ကြမ်းပိုးကြောင့် ဒုက္ခမရောက်ဖူးဘူး
nigimi77 says: ကြမ်းပိုးဆိုတာက နေရာထိုင်ခင်းညစ်ပတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျ
ရာခိုင်နှုံး အပြည့်အ၀တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။
အဲဒီ အကောင်တွေက လူတွေ မိတ်လိုက်သလိုပဲ သူ့ ဆင်ခြေနဲ့ သူတော့ ရှိမှာပေါ့။
ကျုပ် ဟိုဟိုဒီဒီ မှီငြမ်းပြီး ရေးလိုက်ဦးမယ်။ အဲဒီမှာ ဆက်ပြောရအောင်။
nature says: ရေးပါဦး nigimi77 ရေ။ အားပေးပါတယ်။ ဟိုဘ၀က ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုနှိပ်စက်ခဲ့လဲတော့ အတိတ်ဘ၀ကို ပြန်မမြင်နိုင်လို့ မသိဘူး။ ဒီဘ၀မှာတင် ငယ်ငယ်ကတော့ တော်တော် ရက်စက်ခဲ့ဘူး ပါတယ်။ အကုသိုလ်ပွါးမှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူး။
ကိုရင်အောင်ပု ဒီမှာရေးထားတာလေးတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်တော့၊ ဂျပိုးတွေဟာ အချိန်ကို မသိဘူး။ အမှောင်ကြိုက်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတယ်။ ဒါကြောင့်ညစောင့်စရာမလိုပဲ နေ့ခင်းဘက် ပြတင်းပေါက်တွေကို ကန့်လန့်ကာ ကာပြီး မှောင်လာလို့ ဂျပိုးထွက်လာရင် spray နဲ့ရှင်းဖို့ စိတ်ကူးရလာတယ်။ အိပ်ရေးမပျက်တော့ဘူး။
aungnng87 says: ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်နေတဲ့တအိမ်လုံးကို ဆေးအသစ်ပြန်သုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီစပရေးဘူးတွေလဲ ဖျန်းတာဘဲ။ ဗမာပြည်က ဂျပိုးသတ်ဆေးလဲ သုံးတယ်။ အဲဒါကကောင်းတယ်။ ဂျပိုးတွေတော်တော်ငြိမ်သွားတယ်။ကိုယ်အိပ်တဲ့အခန်းထဲမှာ ပစ္စည်းတွေလျှော့ပလိုက်တယ်။တတ်နိုင်သမျှရှင်းသွားအောင်လို့။ ပြီးရင် အိပ်ခန်းကို ကြမ်းခဏခဏတိုက်ပေးတယ်။ ဖုံမရှိအောင်လို့။ ဂျပိုးတွေကလည်းဖုံကနေတဆင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်လို့လေ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ အော်… ပြီးတော့မွေ့ယာတွေလည်း လွှင့်ပြစ်လိုက်တယ်။ အသစ်သုံးတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ဂျပိုးမရှိတော့ဘူး။ ကြမ်းကတော့တိုက်ပေးရမယ်။ အုတ်နံရံမှာအပေါက်သေးသေးလေးတွေရှိရင်သူတို့ကခိုနေနိုင်သေးတယ်။